China Forklift rim maka Linde na BYD China OEM na-emepụta ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Hygg
Kedu ihe bụ forklift rim?
Ihe forklift rim a na - ejikọta ya na taya iji buru ibu nke ugbo ala ma gbasaa ngwa ngwa n'ọnọdụ dị iche iche. Forklift rim dị oke egwu maka ndụ ndụ oge niile na arụmọrụ arụmọrụ, ọ dị mma forklift rim nwere ike ibu oke ibu ma nyere aka fọọlụ na-agba ọsọ nke ọma ma rụọ ọrụ nke ọma. Ọ dị ezigbo mkpa ka forklift nwee ike, ntụkwasị obi ma dịkwa mfe ịrịgoforklift rim. Ngwaahịa anyị HYWGforklift rim bụ ezigbo nhọrọ maka ndị nwe ụlọ forklift n'ihi na anyị gosipụtara mma, ọnụahịa dị mma na ụdị forklift rim maka ọtụtụ ụdị. Anyị bụ ndị OEM rim emeputa maka nnukwu aha dị ka Linde na BYD.
Olee ụdị ọtụtụ forklift rims?
E nwere ọtụtụ ụdị forklift rim, akọwapụtara ya na nhazi ọ nwere ike kewaa rim, 2-PC, 3-PC na 4-PC. Split rim bụ obere na ọkụ ma jiri obere forklift, 2-PC rim dị mfe ịrịgo, 3-PC na 4-PC rim na-eji site na etiti na nnukwu forklift, ha nwere ike iburu ibu dị arọ na nnukwu ọsọ. Igwe eletriki eletrik na-ejikarị 3-PC na 4-PC rim n'ihi na otu nha ahụ rim nwere ike iburu ibu karịa ma ha na-agba ọsọ karịa jụụ karịa ụdị rim ndị ọzọ.
Kedu ihe eji eme ihe eji eme ihe?
Nke anyi forklift rim enwere ike iji ya maka ụdị dị iche iche dịka:
3.00D-8 Kewaa 5.00-8 Linde, Toyota, Nissan
4.33R-8 Kewaa 16x6-8 Linde, Toyota, Nissan
4.00E-9 Kewaa 6.00-9 Linde, Toyota, Nissan
5.00F-10 Kewaa 6.50-10 Linde, Toyota, Nissan
5.00S-12 Kewaa 7.00-12 Linde, Toyota, Nissan
7.00x20 2-PC 9.00-20 Pusi
Uru anyị nke forklift rim?
(1) Anyị nwere ike ịnye ọ bụghị naanị forklift rim zuru ezu kamakwa forklift rim akụrụngwa dị ka mgbanaka mkpọchi, akụkụ mgbanaka, flanges na bead oche.
(2) Uru anyị bụ na anyị nwere igwe igwe anyị nke na-ewepụta ihe ndị dị ka mgbanaka mkpọchi, mgbanaka, mgbanaka akụkụ, oche bead 100% site na anyị onwe anyị, anyị na-enye ogo dị elu na ọnụ ahịa ezi uche.
(3) Anyị nwere ọtụtụ forklift rim gụnyere ụlọ ọrụ mmepụta ihe nkewa, 2-pim rim, 3-PC rim na 4-PC rim, anyị nwere ike ịnye ụdị ụdị forklift rim.
(4) Nnukwu OEM dị ka Linde, BYD na ndị ọzọ na-emepụta forklift gosipụtara ogo anyị.
Nke gara aga: Mining rim China OEM emeputa size si 33 ″ ka 63 ″
Osote: Industrial rim maka Ọganihu inwego Tele handler China emeputa
Akpa ebuli rim iru stacker rim na efu ...